Как правильно сажать яблони весной — Сад и огород
Источники: http://rassada.info/yablonya/kak-posadit-vesnoi.html, http://agronomu.com/bok/1781-pravila-posadki-yablon-vesnoy-kogda-sazhat-kak-sazhat-osnovnye-oshibki-pri-posadke.html, http://openfile.ru/dacha-i-sad/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8E-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9.html
Fambolena voajanahary tsara — fikolokoloana
1. Manomana ny tany isika — manao faribolana, mamaha ny tany, ary eo afovoany dia mihodina lavaka kely.
2. Manala tsimparifary isika.
Ho toy ny fiakanjo avo loha dia manampy amin'ny lava maina volo (telo, 4 taona). Raha mampiasa soavaly ianao (eo amin'ny tranga misy antsika), dia afaka mamy vaovao ianao, satria efa voakorontana miaraka amin'ny savoka sy ny ahitra. Ny doroara dia ampiana amin'ny ampahany amin'ny iray na telo.
4: Hamafiso ny tany amin'ny zezika — efa vonona ny tany ho an'ny fambolena! Ny fambolena toy izany dia mety hambolena zavamaniry maro, afa-manangona!
5. Maka siramamy avy amin'ny fitoeran-drano izahay, mihozongozona moramora avy eny an-tany mba hanamafisana "ny zavamaniry".
6. Mamboly lava-drano izahay ary manondraka ny tany.
7. Milaza ara-bakiteny hoe "mampidina" ny taranatsika ao amin'ny tany isika.
8. Manimba ny tany manodidina ny tanorantsika amin'ny tanantsika … sy ny tongotra!
10. Mamboly ranon-javatra betsaka izahay mba tsy hisy rivotra tavela ao amin'ny tany mba tsy hamotika ny fakany ary ny tany dia maina.
11. Manamboatra tetezana manodidina ny lavaka ("manda") isika mba handrarahana tsara mba tsy handehanan'ny rano.
Vakio ihany koa: Fambolena zana-ketsa — ahoana ary rahoviana
Fambolena zana-ketsa amin'ny tanany — sary
© mpanoratra: Natalia Grigoryeva Sary: Igor Piskarev
Fambolena namboly, saingy mbola nijanona ny fanontaniana …
Taorian'ny nambolena ireo zana-ketsa, dia mety ho nisalasala ny mpamboly tsy manana traikefa raha nanao ny zava-drehetra izy. Voamarina amin'ny alàlan'ny taratasy izany, miantso amin'ny mpamaky amin'ny fanontaniana ny mpamaky. Ny profesora mpanampy ao amin'ny Departemantan'ny toeram-pambolena sy ny tanimboly ao amin'ny Anjerimanontolom-pambolena any Grodno, Candidate for Scientific Agriculture Pavel Sheshko dia hanampy amin'ny fanatsarana ireo teboka sasantsasany.
Namboly siramamy aho, nefa manahy aho sao tratrako. Efa azo atao ve io vanim-potoana io mba hahitana hoe nisy zavatra tsy nety?
Anatoly Kravchuk, faritr'i Kiev
Ny famokarana feno amin'ny akanjo fanao mahazatra sy ny fakan-kazo dia mety ho maina (ary mety ho tapaka mora foana) raha manadino ny rano ianao aorian'ny fambolena azy. Amin'ny fararano amin'ny fararano (amin'ny volana Novambra) ny fambolena ny zana-ketsa dia tsy manam-potoana haniry ho solon'ny hatsiaka ny fakany, ary mety ho maina ny ririnina amin'ny ririnina.
Tao an-davaky ny tany no nanadino fa hitondra tsato-kazo.
Vao haingana no nanamarika fa ilay sakana mivelatra. Inona no tokony hatao?
Alexander sy Natalya Semenov, faritra ao Minsk — Ho an'ny hazo fihinam-boa, ny fianteherana amin'ny taona voalohany amin'ny fiainana dia ilaina fotsiny. Raha tsy misy izany, dia afaka mihozongozona ny rivotra. Vokatr'izany, ny lavaka dia miforona eo amin'ny vozon'akondro, ary vokatr'izany, ny fakan-drivotra izay mandry amin'ny elany lalina dia rovitra. Ny siramamy tsy fantatra dia lasa "tsy manan-kery" mandritra ny herintaona. Amin'ny hoavy dia tsy tokony hiantehitra amin'ny voankazo feno ianao. Izao no famaranan? Ilaina ny miaro ny voanjo. Mazava ho azy, fa misy tsato-kazo (diameter 3-5 cm) tsara ny mandeha ao anaty lavaka voaomana mialoha. Azonao atao anefa izao: manosika azy amin'ny tananao amin'ny tanana lava 10-15 cm avy amin'ny valan-javamaniry (avy amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny fironana). Raha mahatsiaro sakana ianao, dia asio kely tsikelikely ny tsatòka, ary asio lalina hatrany.
Ny hazo ao amin'ny tahiry semi-dwarf sy miditra dia mila fanohanana amin'ny taom-piainana 2-4 voalohany. Mba hamehezana amina boaty kely iray, ampiasao plastika plastika lavalava miaraka amina diamonda 4-5 mm (amidy eny amin'ny tsena ao amin'ny sampan-draharahan'ny onjam-peo). Hamafiso tsara ny hazo miaraka amin'ny cambric toy izany ho fanohanana ary hamehy azy amin'ny valo valo.
Tamin'ny tapa-bolana tapa-bolana taorian'ny nananganana ilay tenda dia maina. Mampidi-doza ve izany?
Amin'ny ankapobeny dia ny maina dia miala aorian'ny ririnina (noho ny tsy fahampian'ny tavy tsy ampy taona taorian'ny nitroka tafahoatra).
Ny antony mety hitrangan'ny lohataona amin'ny fahalavoana dia ny famokarana siramamy tany am-piandohana (tamin'ny taompolo voalohany na faharoa tamin'ny septambra), raha mbola tsy vita ny fandrosoana. Mety hahavariana ny ririnina. Noho izany, mandinika amim-pitandremana ireo hazo amin'ny lohataona amin'ny taona manaraka ary manapaka ny faritra maina ho an'ny vatan'ny fery.
Nihena ny tany ambanivohitr'ilay fanafihana — izany dia lasa fossa kely.
Tandremo ny toerana misy ny vakisiny. Raha kely indrindra dia tokony ho ambonin'ny haavon'ny tany izany, raha tsy izany dia mety hiditra ao amin'ny fakany manokana ny graft, izay hampitombo ny fitomboan'ny zavamaniry ao amin'ny satroboninahitra ary hampihemotra ny vanim-potoana hidirana amin'ny voankazo.
Raha toa ka mamela ny haavon'ny voana, ny tanin'ny boribory eo akaikin'ilay vatan-kazo dia tokony halefa amin'ny humus, compost — izany dia hanampy amin'ny fihazonana ny fahantrana any amin'ny faritra fotony, ankoatra ny hafanana hafanana
Ny fakan'ny ririnina dia manome sakafo azy ireo. Ary mba hahatonga ny zavamaniry ho tsaboina tsara kokoa ny sakafo avy amin'ny vitsika sy ny komposta, aorian'ny fanolanana, dia mitondrà valan-dalamby miaraka amin'ny biostimulant (ohatra Polyfuncer) araka ny torolalana. Raha mitombo tsara ny tany, dia tsy mila mandatsaka ny tany na ny komposta ianao.
Nambolena tao anaty lavaka ilay zana-kazo, izay efa nolavina tanteraka tamin'ny rano. Mbola mila rano ihany ve aho?
Ny fametrahana ny tsimok'aretina aorian'ny fambolena dia tokony ho rano, na dia mihevitra aza ianao fa ampy ny hamandoana ao anaty tany. Eo amin'ny toeram-pambolena iray (arakaraka ny karazana tany, ny haben'ny làlan-drano) dia tokony harotsaka ao amin'ny 10 ka hatramin'ny 30 l (raha tokony ho latsaky ny latsaka). Rehefa mihintsana ny rano, dia aforeto ny tany ao anaty lavaka ary miondrika amin'ny hume na compost. Amin'ny hoavy dia mety tsy ilaina ny fandroana rehefa tsy misy orana ny fararano (tsy misy orana), izay tsy fahita firy amin'ny toetr'andro.
Ireto manaraka ireto dia lahatsoratra hafa momba ny lohahevitra hoe "Ahoana no fanaovana azy io — ilay tompon-trano!"
Misafidiana voanio malemy CORRECT — Master class (meristem, oks) Ahoana ny fisafidianana ny zana-kavoana mamy. Hanomboka …
Famafazana hazo — fitsipika sy fitsipika Ny voa nambolena dia manambara ny marina: tsia …
Fanimbana sy famolavolana satroboninahitra boribory Ahoana no hamoronana satroboninahitra boribory misy ny artificial Classical …
Ahoana ny fomba hambolena hazo sy toerana hisafidianana toerana hambolena Ny fanangonam-bokatra eo amin'ny toerana miaraka amin'ny …
Fahaizana mamolavola hazo fihinam-boa sy fahadisoana 7 rehefa mamboly hazo amin'ny fahalavoana FANDAMINANA FANDAMINANA — 7 …
Ny fanohanana ireo zana-kazo amin'ny tanany — inona no tokony hatao Karazana fanohanana ho an'ny zana-ketsa Fruit planting …
Ahoana no ahafahan'ny Clematis rano tsy marary? Manao rano mando! POTTICAL EQUIPMENT FOR CLEMATIS AMIN'NY …
Manorata ny fanavaozana ao amin'ny vondrona misy anay.
Осенняя подрезка яблонь Яблоня плакучая краснолистная Как укрыть яблони Яблоня самоцвет
← Монилиоз вишни фото
Как пересадить калину осенью →
3 Подготовка ямы и высадка саженца
4 Как ухаживать за саженцем яблони
5 Когда именно сажать весной?
10 Посадка яблони весной: когда приступать к работе
11 Как выбрать саженцы для посадки: общие советы и рекомендации
12 Выбор места для посадки саженцев
13 Как посадить яблоню весной, поэтапная инструкция
14 Как правильно посадить яблоню весной: распространенные ошибки
15 Оптимальное время для посадки
17 Выбираем зону для высадки
23 Выбираем зону для высадки
26 Fambolena voajanahary tsara — fikolokoloana
27 Fambolena zana-ketsa amin'ny tanany — sary
28 Fambolena namboly, saingy mbola nijanona ny fanontaniana …